ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “အကြံပြုသူများ”
တခါတလေမှာ ကျွန်တော်လဲ အဲဒီလို ခံစားမိပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီရဖို့ဆိုရင် လူတွေအားလုံးက ကိုယ့်ရပိုင်ခွင့်နဲ့ တာဝန်ကို သေချာ သိမှရမှာပါ။ လက်ရှိမှာတော့ တန်မှတန်ရဲ့လားလို့တောင် တခါတလေ စဉ်းစားမိတယ်။
Yes! u r right.
But pls think about urself first
နာ့ကွယ်ရာမှာနာ့အကြောင်းပြောရင် နာ့ဖင်ရှစ်ခိုးတာနော်..သဘောပေါက်..ဟီ ဟိ..
Easily seem are other's faults, hard indeed to see are one's own.
r u talking abt him?
Myo Ohnmar said...
I' sure you are mature guy. so forget about your feelings or conflicts. Tell me your love stories whatever it is with girls or with boys. I will post on my blog. OK ? You will become famous soon in english speaking countries coz I am going to write in English.
“A man is not finished when he is defeated. He is finished when he quits. You've got to surviveadefeat. That's when you develop character.”
- Richard M Nixon -
Nixon masturbated toooo much.
Ko Paw masturbated toooooo much
Ko Paw wanker.... wanker Ko Paw
ကိုပေါ..ပါ။ လက်ရှိ စင်္ကာပူမှာ နေထိုင်တယ်။ အင်ဂျင်နီယာအလုပ်နဲ့ အသက်မွေးတယ်။
လက်လဲကစားတယ်။ masturbation ...
Why are you so nasty Anonymous? Be civilized!
Law Shay …. ကိုလောရှည်။ ကျနော့်မိတ်ဆွေ လူငယ်တယောက်ကတော့ ပြောဖူးပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ဆိုတာ တံဆိပ်ပြောင်းကပ်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်။ လူတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့တွေးခေါ်ပုံကို ပြောင်းလဲကြရမှာ ဖြစ်တယ်။ သူဥပမာပေးပုံက.... ဒီမိုကရေစီဟာ အင်ဂျင်စက်ကြီးတလုံးဆိုရင် လူတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ တွေးခေါ်ပြုမူကျင့်ကြံပုံတွေက အဲဒီအင်ဂျင်ကြီးကို မောင်းနှင်မယ့် လောင်စာဆီနဲ့တူမယ်။ လောင်စာဆီက သူ့အင်ဂျင်နဲ့ မလိုက်ဖက်တဲ့ ကြက်ဆူဆီတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် အင်ဂျင်ကြီးဟာ မလည်ပတ်နိုင်ရုံမျှမက ကြာရင် သံချေးတောင်တက်သွားနိုင်ပါသေးသတဲ့။
weik.zar …. မုန့်ဆီကြော်ရလာရင် ကြုံလာရမယ့် အရေးဖြစ်သလို…အခုလောလောဆယ်မှာလည်း အဲသည်စိတ်ဓါတ်တွေက အကြောင်းခံဖြစ်နေလို့ပါ။
CMA …. စီအမ်အေရေ…. လူတွေမှာ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်နိုင်စွမ်း ကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာ ဒီလို တုန့်ပြန်တတ်တယ်။ ဒါတွေဟာ ကျနော်တို့တတွေ ကျော်လွှားကြရဦးမယ့် အရာတွေထဲက အစိတ်အပိုင်းတွေလို့သာ ခံယူထားလိုက်ပါ။
CMA လက်ကစားတယ်။ Wanker CMA...CMA wanker
ko paw, I visit ur blog sometime to feast any satire which i like, but so surprise to c such kind of comments here. Although u leave it as negligible that leads to insulting to ur blog readers.
Ko wanker, ko ko wanker
ko …. Sorry for the embarrassment caused to you. I don’t like such comments either. ;-) But I will leave these insults asarecord of that particular commentator’s lowly behaviour and to observe how the Burmese community (i.e blog readers) reacts to it. It is interesting that you and CMA dare to come out and say something.
If anyone’s personal data are mentioned in the comments, I will certainly remove such comments.
Furthermore, I’ll putawarning message at the corners of my blog that the readers could expect some profanities in the comments.
I like your point of view ,that's rigt , M'mar will face to such problem although SPDC no longer in M'mar bcoz of most of our people assume that they are come from Thar Ki Win ...har har ...:)